Seranam-piaramanidina London | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | seranam-piaramanidina, Londres
Londres Io no iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao, ary olona an-tapitrisany no mivezivezy manerana ny seranam-piaramanidiny rehetra. Mety efa naheno momba an'i Heathrow na Gatwick ianao, fa raha ny marina dia manana seranam-piaramanidina bebe kokoa ny renivohitra Anglisy.
Amin'ny fitambarany London dia manana seranam-piaramanidina enina Ary anio isika hiresaka momba azy rehetra, ny toetrany, ny toerana misy azy ireo ary ny fomba fitaterana mampifandray azy ireo amin'ny foibe. Azonao atao ny misafidy izay seranam-piaramanidina ampiasaina amin'ny dia manaraka.
1 Seranam-piaramanidina Heathrow
2 Seranam-piaramanidina Gatwick
3 Seranam-piaramanidina Luton
4 Seranam-piaramanidina Stansted
5 Seranam-piaramanidina tanàna
6 Seranam-piaramanidina Southend
Andao atomboka amin'ny malaza indrindra amin'ny rehetra: ny Ny seranam-piaramanidina Heathrow dia eo afovoan-tanàna andrefan'ny tanàna, sahabo ho 32 kilometatra. Izy io dia iray amin'ireo be atao indrindra eto an-tany, tombanana ho 190 tapitrisa ny mpandeha tonga sy miainga isan'andro ary ny seranam-piaramanidina manerantany no miatrika ny mpandeha vahiny betsaka indrindra.
Ny seranam-piaramanidina misy terminal efatra izany miaraka amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana, trano fifanakalozana, birao fampahalalana momba ny fizahan-tany ary fitahirizana entana. Ny faritry ny Arrivals dia miorina amin'ny rihana ambany amin'ny Terminal 1, 3, 4 ary 5 ary amin'ny rihana voalohany amin'ny Terminal 2. Ny mpandeha rehetra tonga dia mandalo ny fifehezana ny lalana, ny fitakiana entana ary ny fadin-tseranana. Efa ao amin'ny efitrano ianao manana ny fivarotana sy ny fampitaovana rehetra hanombohana ny dia.
Ny faritry ny Departures dia amin'ny rihana voalohany an'ny Terminal 1, ny rihana fahefatra sy fahadimin'ny Terminal 2 ary ny lakaly ny Terminal 3, ny rihana faharoa an'ny Terminal 4 ary ny rihana avo indrindra amin'ny Terminal 5. Inona no dikan'ny fifamatorana fitaterana seranam-piaramanidina Heathrow mankany London?
Misy safidy maromaro ho an'ny fiarandalamby. Misy ny Heathrow express Io no fomba haingana indrindra ary mamela anao any London Paddington ao anatin'ny 15-20 minitra. Manomboka miasa ny sokajy 5 amin'ny maraina hatramin'ny 11:55 hariva. Misy serivisy hafa omena Tfl Rail tonga tany Paddington fa tany aloha tany Ealing Broadway, West Ealing, Hanwell, Southal ary, Hayes & Harlington. Mijanona ao anatin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny Terminals 2, 3 ary 4. Hankany amin'ny Terminal 5 dia misy fiaran-dalamby maimaim-poana hafa avy any Heathrow Central.
Ireto fiarandalamby Tfl ireto dia maharitra 25 minitra ary afaka mandoa tapakila iraisana ianao, ny karatra zona 6 na ny Oyster. Afaka mandray ny metro ve ianao? ENY, miaraka amin'ny Tsipika Piccadilly ary avy eo mankany amin'ny faritra sisa any Londres. Mora vidy kokoa izy io saingy maharitra ela kokoa. Nanaraka ny seranam-piaramanidina ny metro, nanomboka tamin'ny 5:10 ka hatramin'ny 11:45 alina. Maharitra 50 minitra eo ho eo ary azonao atao ny mandray azy amin'ny gara telo ao anatin'ny seranam-piaramanidina.
Safidy iray hafa ny Bisy nasionaly mampifandray ny seranam-piara-manidina amin'ny tobin'ny bus afovoany Victoria Couch. Eo anelanelan'ny 40 sy 90 minitra ary misy bisy eo anelanelan'ny 4:20 maraina ka hatramin'ny 10:20 alina. Easybus manome serivisy eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina sy ny afovoany koa izy io. Ny bisy alina, ny N9, dia mihazakazaka isaky ny 20 minitra ary mandatsaka anao ao amin'ny Trafalgar Square ao anatin'ny 75 minitra. Ny vidiny dia 1 pounds. Mazava ho azy fa afaka mandray taxi ihany koa ianao nefa lafo, eo anelanelan'ny 50 sy 45 pounds.
ny atsimon'i London, 45 kilometatra. Mampifandray an'i Londres amin'ny toeran-kaleha 200 any amin'ny firenena 90 ary ampiasain'ny olona 35 tapitrisa isan-taona. Misy fantsona roa io, ny North Terminal sy ny South Terminal. Amin'ny rihana fahatelo misy ny faritry ny fiaingana. Seranam-piaramanidina izy miaraka amina endrika tsotra.
Ao amin'ny Gatwick dia azonao atao ny mividy ny Karatra Oyster. Amin'ny ankapobeny, ity karatra ity dia vidiana mialoha fa azonao vidiana eto ihany koa, any amin'ny Terminal Avaratra sy atsimo, rehefa miala amin'ny Fadin-tseranana na any amin'ny garan-dalamby seranam-piaramanidina ianao.
Misy fiaran-dalamby samihafa mampifandray an'i Gatwick sy Londres: dia ny Gatwick express izay no haingana indrindra. Miala isaky ny 15 minitra avy ao amin'ny South Terminal ary mitondra anao any amin'ny Station London Victoria afaka antsasak'adiny ary tsy misy gara eo anelanelany. Thameslink dia serivisy mivantana iray hafa izay mankany amin'ny Blackfriars, City Thameslink, Farringdon ary St. Pancras International miaraka amina serivisy efatra isan'ora. Southern manolotra serivisy mahazatra any London Victoria amin'ny alàlan'ny East Croydon sy Clapham Junction.
Amin'ny bus dia azo atao ihany koa amin'ny serivisy an'ny National Express (Gatwick - Victoria Coach Station), isaky ny antsasak'adiny. Misy serivisy sasantsasany miaraka amin'ireo gara afovoany. easyBus manana matetika matetika ihany koa ary mora kokoa izy io, mihazakazaka mandritra ny alina ihany koa tsy misy fijanonana mpanelanelana. Manisa kajy mandritra ny adiny iray miaraka amin'ity orinasa ity.
Mazava ho azy, afaka mandray taxi ihany koa ianao ary manontany amin'ny mpamily ny vinavinany ho an'ny saran-dalana, nefa tsy dia mora vidy toa ny lamasinina na bus izany.
ny London Andrefana Andrefana ary izy no iray amin'ireo lehibe indrindra any Angletera. Izy io no fototry ny orinasa mora vidy ary 56 kilaometatra monja avy eo afovoan'i Londres. Ny fomba tsara indrindra hampifandraisana ireo teboka roa ireo dia amin'ny lamasinina satria ny seranam-piara-manidina manana ny gara manokana.
Ny dia mila 21 minitra eo amin'ny lamasinina East Midlands. Thameslink Izy io koa dia miasa eto miaraka amin'ny serivisy ho an'ny Thameslink Farringdon, Blackfriars ary St. Pancras International. Fiaran-dalamby enina no miainga isaky ny adiny iray ary iray isan'ora amin'ny alina. Manodidina ny 40 minitra.
Fomba iray hafa hampifandraisana ny seranam-piaramanidina amin'i London ny bus: National Express manana serivisy 75 isan'andro izy ary adiny iray sy telovolana ny dia, mihoatra na latsaka. Ny fijanonana dia ao amin'ny St John's Wood, Finchley Road, Marylebone Portman Square, Golders Green, Victoria Rail Station, ary Victoria Coach Station. easyBus miasa ihany koa amin'ny fijanonana ao Brent Cross, Finchley Road, Baker Street, Oxford Street / Marble Arch ary London Victoria. Ny tahan'ny dia avy amin'ny 2 pounds.
Orinasa iray hafa dia Terravision miaraka amin'ny fiara fitateram-bahoaka mora vidy izay miainga isaky ny 20 minitra amin'ny ora voalaza ary mijanona ao amin'ny Brent Cross, Baker Street ary Marble Arch rehefa hankany amin'ny gara Victoria Coach Station. Ny tapakila mahazatra dia mitentina 15 pounds. Farany, GreenLine manolotra ny serivisy 757. Avy amin'ny taxi ve ianao? Tokony ho 80 kilao ny vidiny ...
Any avaratra atsinanan'i Londres izy io ary ampiasain'ny orinasa mora vidy ihany koa. Raha ny marina, io no seranam-piaramanidina fahatelo be mpaka indrindra any Angletera ary iray amin'ireo fitomboana haingana indrindra any Eropa. Sahabo ho 60 kilometatra miala an'i Londres afovoany ary mampifandray an'i Londres amin'ny toerana maro any Eropa sy Mediteraneana.
Ny seranam-piaramanidina dia mifandray amin'i Londres lamasinina sy bus. Ny mpanelanelana haingana indrindra dia ny Stansted Express, miaraka amin'ny serivisy miainga amin'ny gara mijanona eo ambanin'ny terminal isaky ny 15 minitra. Ny dia dia 47 minitra ary 36 mankany Tottenham Hale, raha mitady hifandray amin'i Strafford sy ny Victoria Line an'ny fantsona ianao. Miala amin'ny teboka ny serivisy, ary ampahefatra sy sasany hatramin'ny ampahefatry ny adiny iray.
Misy koa ny bus, ohatra ny National Express mihazakazaka tontolo andro mampifandray ny seranam-piara-manidina mankany amin'ny gara bus Victoria miaraka amin'ny fijanonana ao Golder's Green, Finchley Road, St John's Wood, Baker Street ary Marble Arch. Serivisy faharoa kosa mijanona ao amin'ny Liverpool Street amin'ny alàlan'ny Strafford, Whitechapel, Shortich, Bethnal Green, Mile End ary Bow . Manomboka amin'ny £ 8 ny vidiny.
easyBus mora kokoa, miasa isaky ny 15 minitra, 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro Krismasy kely Ny dia maharitra adiny iray sy fahefatra mankany amin'ny lalana Baker miaraka amin'ny saran-dàlana avy amin'ny 2 pounds. Afaka mamandrika amin'ny Internet ianao ary mahazo vidiny tsara kokoa. Terravision Izy io koa dia miasa eto mampifandray ny seranam-piaramanidina amin'i Central London miaraka amina serivisy telo azo atao: mivantana mankany amin'ny Victoria Coach Station, ny lalana mankany Liverpool Station Station ary ny serivisy mankany Stratford.
Taxi 100 vidiny. Ny taxi mainty dia tsy miasa eto, na dia avy any Londres ka hatrany amin'ny seranam-piara-manidina ianao dia afaka mandray iray. Mandoa vola ny taxi amin'ny serivisy alina na faran'ny herinandro.
Iray amin'ireo seranam-piaramanidina mora idirana indrindra any London satria efa ho folo kilometatra ny halavany tsy misy zavatra hafa. Seranam-piaramanidina ampiasain'ny mpandeha raharaham-barotra izy io ary manampahaizana manokana amin'ny sidina mankany New York. Es pequeño ary noho izany dia mora lavitra noho ny hafa izy. Izy io dia manana terminal iray tokana feno.
Amin'ity seranam-piara-manidina ity afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny metro, bus na taxi. Mampifandray azy tsara ny metro miaraka amin'ny tanàna ary manana ny toerany manokana eo amin'ny Docklands Light Railway izay mitondra anao hatrany amin'ireo gara mampifandray (Canning Town, Stratford ary Bank). Ny serivisy dia mihazakazaka isaky ny 15 minitra ary misy taha mitovy amin'ny an'ny metro amin'ny ankapobeny.
Mampifandray ny seranam-piaramanidina ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka eo an-toerana: 473 sy 474. Ho an'ny elanelana lavitra dia be mpampiasa ny taxi. Raha te hahalala ny vidiny dia azonao atao ny mitsidika ny tranokala seranam-piaramanidina
Seranam-piaramanidina fahenina any Londres, misy 64 kilometatra miala an'i Londres. Manana terminal roa ary fifandraisana tsara amin'ny faritra afovoan-tanàna. Ny lamasinina dia fototra mba hahafahanao manararaotra ny serivisy eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny London Liverpool Street Station, amin'ny alàlan'ny Stratford, tontolo andro ary isaky ny 10 minitra. Mamelà lalana latsaky ny adiny iray handehanana.
Azonao atao ihany koa ny manao ity dia ity amin'ny bus. Angamba ianao tonga amin'ny alina ary tsy afaka manararaotra ny fiaran-dalamby na ny fiaingan'ny sidina maraina be. Avy eo tsy misy afa-tsy ny bus ary amin'io lafiny io dia National Express miaraka amin'ny serivisy fitateram-bahoaka alina izay mivoaka ny seranam-piaramanidina amin'ny 11:45 alina ary tonga ao amin'ny Victoria Bus Station amin'ny alàlan'ny Stratford sy London Liverpool Street Station amin'ny 1:25 maraina. Mifanohitra amin'izany no misy serivisy amin'ny 3:15 maraina tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina tokony ho tamin'ny 5:10 maraina.
ny Fiara fitateram-bahoaka X30 voalohany miasa koa izy ireo eto mampifandray seranam-piaramanidina roa, ny Southend miaraka amin'i Stansted amin'ny alàlan'ny Chelmsford, mihoatra na latsaka isaky ny antsasak'adiny.
Eny, hatreto aloha dia miaraka amin'ny seranam-piaramanidina enina any London. Tonga any amin'ny renivohitra Anglisy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia azo inoana fa miditra amin'ny alàlan'ny Heathrow ianao fa raha mikasa ny handeha amin'ny toerana hafa any Eropa ianao dia hitsambikina ny sasany amin'ireo anarana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » seranam-piaramanidina » Seranam-piaramanidina London
Valan-javaboary Tablas de Daimiel
Krakow Jiosy Quarter